IiVisa zokuHamba nguMhlaba | natvisa.com
Imigaqo yeVisa eAfrika ingqongqo kakhulu. Kumazwe amaninzi imipu ayivunyelwa ukuba iphathwe, nangona inokuhanjiswa ngamaphepha-mvume afanelekileyo ukuba zizixhobo zemidlalo. Kwamanye amazwe iingalo kunye neembumbulu kufuneka zibhengezwe zakufika, njengakwimeko yeBotswana.
Iitofu zokuzingela zihlala ziqhutywa ziarhente zikarhulumente, ke ukuba ufuna ukukhuphela ngaphandle ezi trophi, kufuneka ube nemvume kwiSebe leMidlalo evela kumazwe afana neRwanda. Kwamanye amazwe, njengeCamibia, iGhana okanye iMozambiki, abakhenkethi kuya kufuneka bahlawule irhafu yokuphuma.
Izinja, iikati kunye nezinye izilwanyana kufuneka zibe nesatifikethi sezilwanyana ukuze zikwazi ukuhamba. Ukuze kuhanjiswe imbewu, izityalo, imifuno okanye iziqhamo, iindwendwe kufuneka zibe nemvume yoMphathiswa bezolimo bamazwe anjengeMauritius.
Ukulawulwa kweVisa kuMantla Melika kuhlala kungqongqo kakhulu. Ngelixa inkqubo ihlala ilula kwaye ikhawuleza kubemi bamazwe abanesivumelwano phakathi kwamazwe aseMelika, ngezizathu zokhuseleko lukazwelonke, amaxwebhu kunye neemvume ezahlukeneyo ziyafuneka kubemi bamazwe ngaphandle kwesivumelwano samazwe amabini.
Iimfuno zeVisa eMzantsi Melika zineengxaki ezimbalwa kunezo zaseMelika eseMelika Ngokwesiqhelo kukho imiqobo engqongqo engqongqo kwimeko yokungenisa okuphezulu okanye ukuthunyelwa kwemali yangaphandle, kuba akukho mda uphezulu kwimeko yamazwe anjengeBolivia. Nangona kunjalo, kubuninzi bamazwe iimali ezinkulu kune- $ 10,000 kufuneka zibhengezwe.
Ukulungiswa kweVisa kuMbindi Merika kunye neCaribbean kuhlala kuneengxaki ezimbalwa. Kwimeko yokuhambisa izilwanyana zasekhaya, imigaqo iyahluka ngokwamazwe, nangona kwimeko nganye izilwanyana kufuneka zikhatshwe sisatifikethi sezilwanyana. Umzekelo, kwimeko yaseDominica, zizilwanyana kuphela ezisuka kwamanye amazwe ezinokuthuthwa, njenge-USA, Canada, Great Britain kunye namanye amazwe e-Caribbean. Kwimeko yePanama, kukho kuphela izilwanyana zokungenisa elizweni okanye imigaqo yokuthumela ngaphandle, kwaye akukho ngaphezulu kweentaka ezimbini umntu ngamnye ezivunyelwe.
Imigaqo yeVisa yamazwe aseAsia yahluka ngokwamazwe. Kwimeko yase China, kuhlala kunzima ukufumana i-Visa, impahla echasene nolawulo lwezopolitiko ayamkelwa, kwaye kuyacetyiswa ukuba ubhengeze izinto zakudala wakufika.
Bobabini iBrunei neChina azinakukhupha izinto zembali kweli lizwe. Kuxhomekeke kwizivumelwano ezibini kwilizwe ngalinye elinazo, njengoMbutho waMazwe ase-Southeast Asia, abanye abantu abaxhomekanga kwi-visa yokungena okanye yokuphuma kumazwe alandela isivumelwano esinye.
Kwimeko yokungenisa nokuthumela kwelinye ilizwe, ukuthuthwa kwemipu, iziyobisi ze-narcotic kunye nezilwanyana zasendle ezisengozini yokupheliswa akuvunyelwa ngqongqo, nangona kumazwe anjenge India, imipu kufuneka ihambisane nesatifikethi sobunini.
Kuhlala kuthunyelwa ngaphandle simahla iimpahla zezobugcisa ngeenjongo ezingezizo ezorhwebo. Imigaqo yokungenisa kunye nokuhambisa imali isoloko ingqongqo kwaye kuyacetyiswa ukuba uyixele xa ufika. Phantse kuzo zonke izikhululo zeenqwelo moya kukho irhafu yokuphuma.
Ulawulo lwe-visa kwimeko yeYurophu luyahluka ngokwelizwe nakwizivumelwano elizisayinileyo. Abemi be-European Union abadingi viza zokuya kwelinye ilizwe le-EU.
Amazwe angena kummandla weSchengen awayi kuba naxhala lokufumana ii-visa. Abemi bamanye amazwe baya kudinga ukufaka isicelo sokundwendwela kwilizwe lokungena le-EU, nangona i-visa efanayo inwenwela kuwo onke amazwe e-EU.
Abahambi abahamba ngaphakathi kwi-European Union akufuneki babhengeze isixa semali sokungenisa okanye ukuthumela ngaphandle, ngelixa abahambi abaza okanye abahamba ngaphandle kwe-EU kufuneka babhengeze isixa semali esingaphezulu kwe-10,000 euros.
Kuninzi lwamazwe umpu awuvunyelwanga, nangona kwimeko yaseJamani uvunyelwe kuphela abantu abahamba umkhosi, ngelixa kwimeko yaseBelgium naseGrisi uthotho lweemvume ezizodwa ziyafuneka.
Iphepha-mvume lokungenisa elizweni liyafuneka kwimeko yokuhambisa iintaka. Kwimeko yamazwe amaninzi, njengamalungu e-EU, izatifikethi zonyango lwezilwanyana ziyafuneka ukuba umntu uhamba nezilwanyana.
Inkqubo yeVisa kumazwe ase-Oceania kulula kubemi bamazwe abanesivumelwano phakathi kwamazwe abo. Abemi phantse kuwo onke amazwe e-European Union kunye namazwe afana neArgentina, Oman okanye Qatar, phakathi kwezinye, abayidingi visa yokuhlala ixesha elingaphantsi kweenyanga ezintathu eNew Zealand.
Phantse kuwo onke amazwe ubuninzi be-10,000 ye-euro kwiimali zamazwe jikelele ziyavunyelwa, nangona iimali ezinkulu kufuneka zivakalisiwe. Kwimeko yaseOstreliya, kuvunyelwe ukuphatha izixhobo njengempahla ekhangelwe umthwalo, nangona kunjalo nakweyiphi na imeko kufuneka babe nezatifikethi ezihambelanayo ngokulandelelana.
Ukungenisa imbewu kwi-Fiji kufuna imvume ekhethekileyo kwiCandelo lezoLimo. Kwinkoliso yamazwe, ngaphandle kweSamoa, iKiribati, iTuvalu kunye neTonga, akukho rhafu yokuphuma.